जीवनको गति ः कुरुप क्रमबद्धताहरुको श्रृङ्खला – Chitwan Post Daily | चितवन पोष्ट दैनिक
जीवनको गति ः कुरुप क्रमबद्धताहरुको श्रृङ्खला
बिहानीले झिसमिसे उज्यालोको घुम्टोबाट आफ्नो सुन्दर मुहार चियाउँदै गर्दा एउटा भर्खरै जुँगाको रेखी बस्दै गरेको सुकुमार युवक आफूभित्र सँगालेको विशाल सपनाजत्रै भारी साइकलमा हाली एउटा किराना पसलअगाडि टक्क अडियो । उसको साइकल पाउरोटी, पप, केक र अन्य यस्तै बिस्कुटहरुको ठूलो झोलाले थिचिँदै त्यस पसलअगाडि ठिङ्ग उभिएको थियो । त्यस केटोे केही प्याकेट पाउरोटी र पपहरुले आफ्ना हातहरु भर्दै पसलतिर लाग्यो ।
केही क्षणमा नै कताबाट हो कुन्नि एउटा कालो रङको ठूलै कुकुर बेतोडले हानिएर साइकलनेर आइपुग्यो अनि आँखा झिमिक्क गर्न नपाउँदै उफ्रिएर एक प्याकेट पाउरोटी मुखमा च्यापी दौडिहाल्यो । यी सब यति छिटो भयो कि त्यस केटोले केही गर्नै भ्याएन । कुकुर निकै पर पुगिसकेपछि मात्र बल्ल त्यस केटो दौडिएर अलि परसम्म पुग्यो, तर त्यस कुकुर आँखाबाट ओझेल भइसकेको थियो । केटोका पराजित आँखाहरु एकपटक साइकलतिर दौडिए अनि एकपटक फेरि कुकुर दौडिएको दिशातिर । उसको मुहार एकाएक अँध्यारो भयो । त्यस एक प्याकेट पाउरोटीबराबरको पैसा निश्चय पनि साहूलाई उसैको आफ्नो खल्तीबाट बुझाउनुपर्छ । यी सम्पूर्ण क्रियाकलापलाई गहिरिएर विचार गर्ने हो भने यहाँ एउटा संघर्षको पहाड पाउन सकिन्छ । दुवै पक्ष आ–आफ्नो संघर्षको कुरूक्षेत्रमा उत्रिएका छन् यहाँ । प्रत्येक जीवित प्राणीकोे जन्मसँगै एक अथवा अर्को तरिकाबाट संघर्ष सुरू भइहाल्छ नै ।
यहाँ कुकुरको आफ्नै प्रकारको संघर्ष छ भने केटोको आफ्नै
पाराको । कुकुर पशु हो, त्यस कारण ऊसँग ठूलाठूला मह¤वाकांक्षा र सपना पूरा गर्नुको संघर्ष छैन, तर उसकोे संघर्ष पेटका लागि हो । उसको भोको पेटले उसलाई पाउरोटी नचोरी धरै दिएन, सायद् । त्यसैले ऊ यो ठूलो संघर्षमा उत्रियो र सफल पनि भयो । उसलाई आज बाँच्नुछ, आज पेट भर्नुछ अनि केवल आज निदाउनुछ । तर, केटोको कथा बेग्लै छ । ऊ मानिस हो, ऊभित्र चेतना छ सोच्नलाई र बुझ्नलाई, आँखाहरु छन् सपना देख्नलाई अनि मुटु छ सुख र दुःखको अनुभूति गर्नलाई । त्यसैले, ऊ अलि बढी नै सजग हुन्छ, सतर्क हुन्छ अनि संघर्षमा पनि उत्रन्छ । उसको हकमा कुनै पनि पल संघर्षबिनाको हुँदैन ।
त्यो शीतल बिहानीमा आफ्नै ओछ्यानमा न्यानो हुँदै तातो–तातो चियाको चुस्कीसँगै उषाको लालीसँग रम्ने रहर त त्यस केटोको पनि होला ! तर, ऊ आफ्नै पेटका लागि, हुन सक्छ परिवारका लागि पनि आफ्नो न्यानो ओछ्यान र तातो चिया छाडी पसल–पसल दौडन बाध्य छ । यो संघर्ष नै संघर्षको जीवनरुपी मरूभूमिमा ऊ चाहेर अथवा नचाहेर परिसकेको छ । उसका सामु संघर्षका अनगिन्ती डोरीहरु समाई अगाडि बढ्नुभन्दा अन्य विकल्प छैन । त्यो कुकुरले खाइदिएको पाउरोटीकोे पैसा तिर्नुपर्दाको पीडा मनभित्र नै दबाई ऊ प्रत्येक बिहानीलाई त्यसैगरी स्वागत गर्न तम्तयार हुनुपर्छ । ऊ पेट भर्न र आज बाँच्नुसँग मात्र सरोकार राख्दैन । उसको सरोकार भोलिको हो, पर्सिको हो अनि निकै पछिसम्मको भविष्यको पनि हो । त्यसैले, ऊ झन्झन् संघर्षको दलदलमा फस्दै जान्छ भविष्यका लागि अनि सन्तान, दरसन्तानका लागि पनि । ऊभित्र दूबोझैँ मौलाइरहेका अनगिन्ती सपनाहरु
छन् । ती सपनाहरु साकार पार्नका लागि ऊ दौडन्छ, लड्छ, फेरि उठ्छ अनि फेरि दौडन्छ ।
संघर्षको कथाभित्र हामी सम्पूर्ण मानव एक–एक पात्र हौं । हामी प्रत्येक पात्रहरु आ–आफ्नो भागको अभिनयमा जुट्छौँ, एउटा नाटकभित्रका विभिन्न पात्रहरुझैँ । मञ्चमा नाटकको पर्दा खुलेझैँ जन्मसँगसँगै हाम्रो जीवनरुपी नाटकको पर्दा खुल्छ । त्यसपछि समयानुरुप हामी आफूलाई विभिन्न रुपमा यस विश्वरुपी रङ्गमञ्चमा उभ्याउँदै लैजान्छौँ । हामी समयसँग पौँठेजोरी खेल्दै जान्छौँ । कहिले यो मन दसैँको मन्द पवन र नीलो आकाशमा सररर उड्दै गरेको चङ्गाजस्तै हलुका हुन्छ भने कहिले घनघोर वर्षापूर्वको क्रोधपूर्ण कालो–नीलो आकाशझैँ भयावह हुन्छ । हामी आफ्नै मनसँग पनि संघर्षमा उत्रन्छौँ कहिले त ! किनकि, मन चङ्गाजस्तो हलुका हुँदा यसले सारा बन्धन, व्यवधान नाघी टाढाटाढा क्षितिजमा नै पुगूँ भनी उमंग र उत्साहको वेगमा उडान भर्छ, तर यसो गर्न हामी कहाँ सक्छौँ र ?
क्षितिज भन्नु त आँखाको भ्रममात्रै हो भनी जान्ने–बुझ्नेहरु भन्छन् । त्यो क्षितिजसम्म उड्ने चाहना राख्ने मनलाई बाँध्न खोज्छ, मनकै अर्को पाटोले अनि सुरू हुन्छ संघर्ष आफ्नै मनसँग । मनले एक थोक चाहन्छ, तर व्यवहारमा अर्कै गर्नुपर्छ । अनि जब मनभित्रको कोमल हृदयको आवाजलाई लत्याइन्छ, तब त्यहाँ उर्लन्छन् असन्तुष्टिका अनेकन छालहरु र आफूसँगै सोहोरी निकै परसम्म लगी पछारिदिन्छ, त्यो विपरीत बगिरहेको मनको अर्को पाटोलाई । एउटै सग्लो शरीरभित्र अनेकन चिरामा चिरिई आफैँभित्र जल्दै, डढ्दै, पिरोलिँदै र कहिले खुसीले मात्तिँदै जीवनलाई अगाडि बढाउँछ, मानिस । ऊ विभिन्न टुक्रामा टुक्रिन्छ र त्यही टुक्राटुक्रामा आफ्नो अस्तित्वलाई निहाल्ने प्रयत्न गरिरहन्छ, हरपल । उसलाई भयानक जीवनलाई अगाडि बढाउने अभिभारा छ । जीवन सोचेजति सरल, सहज र चाहेजस्तो सरस र कोमल छैन । पटक्कै
छैन । मानिस अगाडि बढ्दै जाँदा ऊसँगै टाँसिएर छायाझैँ आफैँसँग बाटो लागिरहन्छ उसका सुखदुःखका अनुभूति, सन्तुष्ट र असन्तुष्ट पलहरु अनि कुनै सजिला र कुनै अप्ठ्यारा अनुभवहरु । ऊ आफूलाई भुल्छ सर्लक्कै र आफ्ना अनुभव र अनुभूतिका एक–एक पाना पल्टाउँदै खोज्न थाल्छ, त्यहाँ आफैँलाई । ती धुजाधुजा भइसकेका सम्झनारुपी पानाहरुमा आफूलाई त पाउँछ पाउँदैन, तर एउटा नीरस जीवनलाई अगाडि बढाउने बहाना भने पक्कै पाउँछ । ऊ त्यही आफ्ना विगतका पलहरुलाई आफ्ना मन–मस्तिष्कमा पुनः एकपटक प्रशोधित गर्छ र बाँकी जीवन बाँच्नुको अर्थ खोज्न थाल्छ ।
हामी सबै आ–आफ्नो स्तरको अर्थपूर्ण जीवन जिउन हरदम प्रयत्नशील र संघर्षरत रहन्छौँ । संघर्ष जीवन हो, संघर्ष भोगाइ हो र संघर्ष हाम्रै जीवनसँगको लुकामारी हो । संघर्षबिनाको जीवन फिका हुन्छ र मानिस सोकेसमा सजाइएका पुतलीजस्तो वस्तुमा परिणत हुन्छन् । केवल संघर्षले मानिसको अथाह धैर्यता, कोमल मुटु र सचेत मस्तिष्कलाई झन्झन् उजागर गर्दै लैजान्छ । संघर्षका विभिन्न रुपका प्रत्यक्षदर्शी हौँ हामी । हाम्रा आँखाकै डिलमा हाम्रै चेलीहरु आफ्नो घरको सुरक्षित सँघार नाघी समाजले घृणा गरेको विभिन्न क्रियाकलापरुपी संघर्षमा होमिएका छन् । मानिसको मुखुन्डो पहिरिएका पशुहरुका अश्लील शब्दहरु सहदै निरंकुश राजका लागि अभ्यस्त उनीहरुका हातहरुलाई सम्मानपूर्वक आफ्ना शरीरमा स्वागत गर्नुपर्दाको पीडाले उनीहरुलाई जिउँदै लास बनाएकै होला । तर, उनीहरु सहन्छन् । मध्यान्हको टन्टलापुर घाममा पसिनाले निथु्रक्कै नुहाई आफ्ना जीर्ण ढाडमा अजङका भारीहरुलाई स्नेहसाथ बोक्ने ती भरियाहरुको पीडा र संघर्ष उत्तिकै मर्मस्पर्शी
छ । संघर्षले सास रहिन्जेल कसैलाई पनि छाड्दैन । तल्लो वर्गका मात्रै नभई जुनसुकै हैसियतकाले पनि जीवनलाई चुनौती दिँदै संघर्षको उजाड–उजाड बस्तीमा उत्रनुपर्छ । ठूला–ठूला कवि, साहित्यकार र विद्वान्हरु पनि संघर्षको भूमरीलाई स्वीकार गर्छन् ।
यो संघर्षको कहानी आफ्नो बगाइमा बगिरहन्छ, हरेक क्षण । हामी त्यही प्रवाहमा आँउछौँ, हरपल जीवनका मोडहरुमा । कसैलाई त्यो अप्ठ्यारो मोडले पनि सकारात्मक सोच र सिर्जनात्मक कार्यका लागि सहयोग पु¥याँउछ भने कतिले संघर्षका तीता सिरेटाहरु सहन नसकी आफैँभित्र विभिन्न रोगहरु उमार्छन् । तर, सत्य यही हो, हामी विवश छौँ संघर्षका लागि, त्यही युवकझैँ । हामीले प्रत्येक पराजय र दुःखलाई मनकै चितामा चढाई अगाडि बढ्नुपर्छ र आफ्ना ठूला–ठूला सपना र आकांक्षासँग सयर गर्दै मस्त निदाउनुपर्छ ।